Ny raharaham-panonerana ao Karaiba: Fizaràna fahatelo · Global Voices teny Malagasy
Nesorin'ny valan'aretina COVID-19 ny tafon'ny tokantrano karaibeana" hampiseho "lova mahatsiravina"
Voadika ny 24 Novambra 2020 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, 한국어, Français, English
Pikantsary ny iray amin'ny rakotra fandravahana ao amin'ny tranonkalan'ny Vaomiera fanonerana CARICOM.
Ity no lahatsoratra fahatelo amin'ny andiany manasongadina ny resaka fanonerana fanandevozana tao Karaiba. (Ato ny voalohany; ato ny faharoa.) Izy ity dia mifototra amin'ireo lohahevitra nifampidinihana nandritra ny lanonana mivantana an'aterineto (live stream) NGC Bocas Lit Fest, “The Case for Reparations,” [Tranga mila fanonerana] izay manasongadina ireo resaka lalina nifanaovana tamin'i Sir Hilary Beckles, mpitarika ny CARICOM Reparations Commission.
Dimanjato sy roapolo valo amby taona (Valo amby roapolo sy dimanjato taona) taorian'ny nanitsahan'i Christopher Columbus ny kaontinantan'i Amerika, ka nampirongatra ny fanjanahantany izay nahatonga ny fandripaham-bahoaka tompotany sy nanome lalana malalaka ny fanaovana ny aina Afrikana ho entambarotra, nandefa mivantana an'aterineto ny resadresaka nifanaovana tamin'i Sir Hilary Beckles ho fahatsiarovana ny andro iraisampirenena hitakiana ny fanorenana ny NGC Bocas Lit Fest, ny fetibe literera voalohany an'i Karaiba.
Amin'ny fametrahana farany ity andiany ity, noheverin'ny Global Voices ny anjara asan'ny oniversite amin'ny antso itakiana fanonerana, sy mamakafaka ireo fomba ahafahan'ny faritra mamelatra maodelin-toekarena maharitra kokoa.
‘Nolanjain'ny’ oniversite ny rafitra fanamboniana ny fotsy
Raha nanomboka tao amin'ny sarangan'ny mpampiasa vola ny fanaovana ho lasibatra ny aina mainty, dia nomen'ny rafi-pampianarana (sokajin'asa fahatelo) mihaja tandrefana rariny, izay mipetraka “eo afovoan'ny famoronana ny fotokevitra fiamboniana faratampony fotsy sy ny fomba hampaharitra izany indrindra.”
Ny voan-kevitra nanova ny olona ho lasa fananana, hoy i Sir Hilary, namadika izany fomba izany ho lalàna ary mampiseho ny fomba fiasany amin'ny fomba fitsarana, dia nivoaka avy amin'ny oniversite, tahaka ny hevitra hoe ambany ara-fototarazo sy ara-pahalalàna ny olona mainty. Zavatra nampiroboroboin'ny departemanta misahana ny fianarana ny olombelona ao amin'ireny sekoly ireny tamim-pahavitrihana ny fandaminana ny olona amin'ny alalan'ny antanantohatra (volonkoditra).
Mihevitra ny Vaomieran'ny Fanonerana CARICOM araka izany fa zava-dehibe ny manana fomba fampianarana vaovao amin'ny fampandrosoana ara-toekarena tsimialonjafy, ka hita ao ny fitsipahana ny voankevitra fa misy idiran'ny volonkoditra ny fahalalàna sy ny fahaizan'ny olona iray. Raha atao amin'ny teny hafa, manana anjara toerana fototra ny oniversite amin'ny fanongotana ny rafitra tsy ara-drariny izay nisy dian-tanan-dry zareo, ary amin'ny alalan'ny asan'ny Vaomiera ry zareo no “tafiditra ao anatiny tsirairay.”
Ny fandrahoan'ny ‘Triple C’
Nanamarika i Sir Hilary fa “nesorin'ny valan'aretina COVID-19 ny tafon'ny tokantrano karaibeana” hampiseho ny “lova mahatsiravina” navelan'ny fahantrana, herisetra an-tokantrano, ny hatsana ara-toekarena. Mila fomba fijery maro taranja ireo olana ireo, hoy izy.
Talohan'ny nahatongavany tao Karaiba, Nametraka task force ahitana virolojista, mikrobiolojista, epidemiolojista, nokendrena handalina ny viriosy amin'ny fomba fijery siantifika ny Oniversiten'i Antilles. Fa rehefa tafiditra ny morontsiraka ara-paritra nefa ilay viriosy, dia tsy maintsy narafitra indray mandeha ilay vondrona hijery ny valan'aretina ao anatin'ny valan'asan'ny siansan'ny lahyvavy, antrôpôlôjia, sôsiôlôjia ary politika.
Ny lohahevitra nanery indrindra manodidina ny COVID-19 no lasa lefy kokoa momba ny siansa sy ny tsy rariny. Eo amin'ny fanabeazana, ohatra, izay noterena hiditra anjotra, ampahan’isanjato manandanja amin'ny olompirenena karaibeana no tsy afa-miditra aterineto ary tsy manana ny vola hanentsenana ny banga (elanelana) ireo governemanta ao amin'ny faritra — fa maro amin'izy ireo no miankina betsaka amin'ny fizahantany.
Afa-manana anjaran toerana goavana kosa ireo tetikasam-panonerana ara-drariny amin'ny fiatrehana ireo fanamby tahaka ireto, ary ny vaindohan-draharahan'izany izay antsoin'i Sir Hilary hoe “Triple Cs”: chronic diseases [aretina mitaiza], fiovaovan'ny toetrandro ary ny kolontsaim-pizahantany ao amin'ny faritra, ary ny COVID-19, dia ireo rehetra nosokajiany ho “cocktail-n'ny fandrahonana misy amin'ireo nosy ireo.” Na dia tsy misy aza ny fanohanana maro-zotra sy iraisampîrenena ho an'ireo fanamby ireo, “noteren'ny any ivelany apetraka ny ankamaroan'izy ireo ho ampiharina amin'ny faritra, tsy hanao izany i Karaiba.
‘Any amin'ny misy finiavana no ahitana lalana’
Tsy isalasalana fa raha mavitrika amin'ny fitadiavana fanonerana i Karaiba, dia miady varotra avy amin'ny alalan'ny hantsana ara-toekarena. Na izany na tsy izany, ny ankamaroan'ny loharanonkarenan'ny faritra dia notrandrahan'ny mpanjanaka hanabe voho sy hanamafisa-tanjaka ny orinasany. Saingy, nandroso tao amin'ny sahan'ny “hitsiny ara-maoraly, ny fahitsiana ary ny mahaolombelona” ny Vaomieran'ny fanonerana CARICOM, izay manarina ny kianja filalaovana.
Manampy izany, nanatona ny Vaomiera ao amin'ny Firenena Mikambana, hanara-maso ny fizotra, miasa amin'ny toerana itovian'ny firenena mpikambana rehetra mandray anjara tantana. Tsy midika izany fa ho mora ny fizotra, fa azo tao anaty ady mafy avokoa ny vokatra azo tamin'ny famongorana famarotana andevo manavatsava an'i Atlantika.
Nandany ny taonjato faha-19 iray manontolo, hoy ny fanamarihan'i Sir Hilary, ny famongorana ny fivarotana andevo ary 60 taona hahazoana ny fanafahana feno avy amin'ny fanandevozana, ary ny taonjato faha-20 iray manontolo hiadiana amin'ny fahazoana ny demaokrasia, ny zon'olombelona sy ara-tsivily. Ny “fotoana fanonerana ara-drariny” no dingana farany amin'ny dia lava dia lava, hoy ny finoany, mitondra ny fikantonany sy ny rariny ho an'ny rehetra.
“Raha maka antsika rehetra amin'ny taonjato faha-21,” hoy izy, “tsy hitsahatra izahay.”